Mas'uul hore Caan ah oo ku baaqay in wada-hadal lala furo Al-shabaab | Koonfur Galbeed News
[ 12th December 2019 ] Sawirro:-Diyaarad ku burburtay deegaan ka tirsan Gobolka Hiiraan	Arimaha Gudaha
[ 12th December 2019 ] Golaha Wasiirrada oo ansixiyay Hindise-sharciyeed muhiim ah	Arimaha Gudaha
[ 12th December 2019 ] Muxuu RW Kheyre ka yiri xalka laga gaaray dhismaha Galmudug?	Wararka Maanta
[ 12th December 2019 ] Maxaa ka jira in xal laga gaaray dhismaha Galmudug, maxaase ogtahay?	Arimaha Gudaha
[ 11th December 2019 ] RW ku-xigeenka Dalka oo ka qeyb galay Shirweyne ka dhacay…	Arimaha Gudaha
HomeArimaha GudahaMas’uul hore Caan ah oo ku baaqay in wada-hadal lala furo Al-shabaab
Mas’uul hore Caan ah oo ku baaqay in wada-hadal lala furo Al-shabaab
11th September 2019 Arimaha Gudaha, Wararka Maanta 0
Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa ka hadlay dagaalka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-shabaab.
Cabdi Faarax Shirdoon ayaa waxaa uu ku baaqay in wada hadal toos ah lala galo dagaalamayaasha Al-shaabaab,isagoona sheegay in dadkaas ay yihiin Soomaali.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya ayaa la tilmaamay in Al-shabaab ka arki waaye,isla markaana ay fiicneed in laga guuleysto,hayeeshee taasi ay dhici weyday.
Isaga sii hadlaayay Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in aan la dhaliilsan kari nabada wadahalka ku timaada,isagoo xusay in ay aad u fiican tahay in Al-shabaab wada-hadal lalagalo.
Ugu dambeyntii Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa waxaa uu sheegay in hadii xal Milateri adkaado loo baahan yahay in la helo xal siyaasadeed six al loogu helo amniga dalka.
Shirka Deyn Cafinta Soomaaliya oo maalintii labaad ka socda dalka….
Amar lagu soo rogay gaadiileyda Mooto Bajaajta ee Dhuusamareeb
Sawirro:-Diyaarad ku burburtay deegaan ka tirsan Gobolka Hiiraan
Wararka aan ka heleyno deegaan ka tirsan Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee Maanta halkaas ay ku burburtay diyaarad nooca aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaano Drones-ka. Diyaaradan ayaa sigaar ah
Golaha Wasiirrada oo ansixiyay Hindise-sharciyeed muhiim ah
Muxuu RW Kheyre ka yiri xalka laga gaaray dhismaha Galmudug?
Maxaa ka jira in xal laga gaaray dhismaha Galmudug, maxaase ogtahay?
RW ku-xigeenka Dalka oo ka qeyb galay Shirweyne ka dhacay…
Sawirro:-Diyaarad ku burburtay deegaan ka tirsan Gobolka Hiiraan 12th December 2019
Golaha Wasiirrada oo ansixiyay Hindise-sharciyeed muhiim ah 12th December 2019
Muxuu RW Kheyre ka yiri xalka laga gaaray dhismaha Galmudug? 12th December 2019
Maxaa ka jira in xal laga gaaray dhismaha Galmudug, maxaase ogtahay? 12th December 2019
RW ku-xigeenka Dalka oo ka qeyb galay Shirweyne ka dhacay… 11th December 2019
Wararka aan ka heleyno deegaan ka tirsan Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee Maanta halkaas ay
Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa Maanta kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxa ay ku meel mariyeen hindise-sharciyeedka difaaca Qaranka Dalka oo
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane, Xasan Cali Kheyre, ayaa soo dhoweeyay heshiiska dhex maray Dowladda Federaalka iyo Ahlu Sunna
Waxaa Maanta oo Khamiis ah xal laga gaaray Khilaafkii mudada dheer hareeyay dhismaha dowlad Goboleedka Galmudug, kaasi oo u dhexeeyay
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa magaalada Aswan ee dalka Masar uga qayb galay